६ कक्षाकि विद्यार्थीले हो’स्टलमै बच्चा ज’न्मा’ईन्, हे’ड’सर गि’र फ्ता’र ! – PathivaraOnline
Home > समाज > ६ कक्षाकि विद्यार्थीले हो’स्टलमै बच्चा ज’न्मा’ईन्, हे’ड’सर गि’र फ्ता’र !
६ कक्षाकि विद्यार्थीले हो’स्टलमै बच्चा ज’न्मा’ईन्, हे’ड’सर गि’र फ्ता’र !
admin November 23, 2021 समाज 0
भा’रतको उडिसामा होस्टलमा रहेकी एक छात्राले बच्चा जन्माएपछि दुई जना शिक्षकलाई गि’र’ फ्ता’र गरिएको छ । छात्राले बच्चा जन्माएपछि स्कुलका प्रधा’नाध्यापक र होस्टल सु’परिटेन्डेन्टलाई गि’र’ फ्तार गरिएको हो ।
दु’वैजनालाई घ’ट’ नाका बारेमा जानकारी न’दिएर प्र’शासनबाट लु’का’उन खोजेको आ’रो’ प लगाइएको छ । सरकारी तवरबाट सञ्चालित उमुरी आश्रम नामको उक्त विद्यालय आदिवासी जनजातिका ब’च्चाहरुले पढ्ने आवसीय स्कु’ल हो । स्कु’लमा उक्त घ’ट’ ना भएपछि ति छा’त्रालाई समेत एक जि’पमा राखेर उनको गाउँ उप्परकेंडीमा बाबु आमाको साथमा प’ठाइएको थियो ।
प्रारम्भिक अ.नुसन्धानपछि प्र’ह’रीले प्रधानाध्यापक कै’लाश बर्मा र होस्टल सुपरीटेन्डेन्ट सबिता गु’रुलाई नि’यन्त्रणमा लिएको हो । ज’नवरीदेखि यता स्कुलमै छा’त्राले बच्चा जन्माएको यो दोस्रो घ’ट ना हो । यसअघि २३ ज’नवरीमा कन्धमाल जि’ल्लाको लिं’गागडामा एक आ’वासीय स्कुलमा १० कक्षामा पढ्ने छा’त्रा’ले होस्टलमै बच्चा ज’न्माएकी थिइन् ।
यो पनिः ओलीका अगाडि निरीह सचिवका आकांक्षीहरू
नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा पार्टी पदाधिकारीका आकांक्षीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । महाधिवेशनबाट पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएकाले पदाधिकारीका आकांक्षीको लर्को लागेको हो ।
महाधिवेशनले १५ पदाधिकारीसहित २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्नेछ । अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई नै पुनः दोहोर्‍याउने प्रयास भइरहेका बेला उपाध्यक्ष भीम रावलको उम्मेदवारी घोषणाले ध’क्का लागेको छ । माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालबिना पहिलो पटक हुन लागेको महाधिवेशनमा ओली सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्न चाहन्छन् ।
पार्टी विभाजनका बेला नेता नेपालको साथ छाडेर एमालेमै बसेका उपाध्यक्ष रावलले मात्र अहिलेसम्म एमालेमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । नेता नेपालको साथ छाडेका १० जना नेतामध्ये उपाध्यक्ष रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसालबाहेक अन्य नेता अझै मौन छन् । ओलीविरुद्ध सं’घर्षमा उत्रिए कुनै जिम्मेवारी नपाउने आशंकामा उनीहरू मौन रहेका हुन् ।
कमाउन गएका नेपालीको मानसिक सन्तुलन गुमाएपछि मलेसियाबाट फर्काउन सहयोगको अपिल!
यसरी बेचिएको रहेछ भारतलाई महाकाली नदि, को-को थिए यसका प्रमुख नाइके हेर्नुहोस
काेराेना लागेकाहरूलाई बचाउँदा बचाउँदै आफै काेराेना लागेर ज्यान गुमाईन् यी नर्सले!
जंगली च्याउ खाँदा एकै परिवारका ९ जना सिकिस्त
विकाश मोक्तान उर्फ सिपिआर टाटुवाला, घरमा छोरीसहित श्रीमति, तर सिंगल छु भन्दै मोज गर्दै…